xuquuqda Immigrant: ogaato xuquuqdaada sida muhaajir | USAHello
Ma og tahay xuquuqda aad leedahay ee USA? Haddii aad tahay muhaajir, aad leedahay xuquuq, xuquuqda aadanaha, iyo xuquuqda sharciga ah. Waxaad leedahay xuquuq, kuwaas oo xataa haddii aad sharci ama in lagu hayo. Baro oo ku saabsan xuquuqdaada.
xuquuqda Immigrant dadka magangelyo doonka ah
Ogow doonka Rights LGBTQ Asylum (English)
Xarunta Immigrant Justice Qaranka waxaa laga heli karaa si ay u bixiyaan talo sharci ah siiyaan gudbinta sharci. Waxaad la xiriiri kartaa Xarunta Qaranka ee Immigrant Justice lambarka toll free ay: (312) 263-0901. qoraalkani u taagan yahay dadka ka cabsadeen inay dalkoodii ku noqdaan oo ay ugu Wacan inay Yihiin lesbian, gay, labeeb ama jinsi (LGBT) iyo / ama ay sabab u tahay xaaladda HIV. Waxaa laga yaabaa inaad difaac ka dhan ah masaafurin Haddaad ka Cabsataan laguu dhimi doono ama jirdilay haddii aad soo tarxiilay dalkaagii hooyo.
Waxa kale oo aad ka akhrisan kartaa document ee Isbaanish, Faransiiska, ama Carabi.
“Waxaan leeyihiin xuquuq” - videos ka ACLU
Waxaad ka arki kartaa oo dhan videos ee Spain, Urdu, Carabi, Creole Haiti, Ruush iyo Mandarin on the site ACLU.
Nolosha USA - og xuquuqda waddanka u soo guurey aad
Kaararka Red Immigrant Resource Center Legal ee la abuuray si loo caawiyo dadka caddayn xuquuqdooda iyo difaacaan naftooda xadgudubyada dastuurka. Waxay dadka ka caawiyaan ogaan xuquuqdooda muhaajir (haddii halkan si sharci ah ama aan) ama xataa muwaadin jimicsi laga yaabaa in haddii hor.
ICivics waa website halkaas oo carruurta iyo dadka waaweyn ciyaari karo kulan video si ay u bartaan oo ku saabsan xuquuqda iyo sharciyada dalka Maraykanka. Qaar ka mid ah kulan ayaa sidoo kale waxaa la ciyaari karaa Isbaanish.
xuquuqda Immigrant la ICE
Akhri macluumaadka this si aad iskaga dadka aan sharciga yiqiin dhab ah loo ilaaliyo! Waxaa jira dad iskadhiga doono inuu ku caawiyo si ay lacagtaada ku haysan karto. Baro sida loo aqoonsado oo aad naftaada ilaaliso! Xarunta Waxtarmada Legal Immigrant The (ILRC) Macluumaad in aad ka khiyaamo ilaaliyo dhigtay. Waad awoodaa akhriska iyo soo bixi macluumaadka ku jira Ingiriisi. Ama aad awoodid akhriska iyo soo bixi macluumaadka ku jira Isbaanish.
Ogow warbixin xuquuqda ka IRAP ulaha SIV imaanaya USA
HADDII update software
lagu hayo Immigrant: caawin waayo, dadka oo ku taalla xuduudda-US Mexico
Macluumaadka on this page ka timaadaa ACLU, ka Justice Center Immigrant Qaranka (NIJC), ka Immigrant Xarunta Sharciga Resource (ILRC) oo kale ku kalsoon tahay ilaha. Waxaa loogu talagalay hanuun iyo waa la cusboonaysiiyaa inta badan ee suurtogalka. USAHello ma siiyo talo sharci ah, mana ka mid ah waxyaabaha aannu loogu tala galay in la qaado, sida la-talin sharci. Haddii aad raadineyso qareen lacag la'aan ah ama qiime jaban ah ama caawimaad sharci, waxaan kaa caawin karnaa hesho adeegyada sharci oo bilaash ah iyo qiimo-yar.